Rano 1,3-dimethylbutylamine poids (108-09-8) - Manufacturers - Phcoker
SKU: 108-09-8 Sokajy: Weight Loss
Rohan 1,3-dimethylbutylamine poids (108-09-8) video
Roahina 1,3-dimethylbutylamine poids (108-09-8)
Product Name Rohamena 1,3-dimethylbutylamine
Anarana simika Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder;108-09-8; 4-methylpentan-2-amine;2-Pentanamine, 4-methyl-;2-Amino-4-methylpentane; 1,3-Dimethylbutanamine
molekiolan'ny Formula C6H15N
molekiolan'ny Wvalo 101.19
mitsonika Point 108-110 ° C
Ny antsasaky ny biolojia mihoatra ny 18 + ora (amphetamines fantatra amin'ny hoe efa ela).
Color Clear Clear Color
Application Ny kofehy vita amin'ny 1,3-dimethylbutylamine roah dia ampiasaina mba handinihana ny fampiharana ny hormone polymethacrylate tsy misy endriny ho toy ny dingana mipetraka ao amin'ny chromatographie mitana ny UV detection.
Raw 1,3-dimethylbutylamine poana (108-09-8) Description
Ny roah 1,3-dimethylbutylamine poids (1,3-DMBA), na ny dimethylbutylamine tsotra (DMBA), dia fanafody mampikorontana mifandray amin'ny methylhexanamin (1,3-dimethylamylamin (1,3-DMAA)) izay misy vondrona butyl manolo ny vondrona amyl. Antsoina koa hoe Citrate AMP (4-amino-2-methylpentane citrate). Ny Citrate AMP dia tsy miteraka amin'ny doka goavana, fa azo hita ao anaty vola kely ao amin'ny Tea Pouchong, saingy heverina fa ny ankamaroan'ny Citrate AMP ampiasaina amin'ny fanampim-panafody dia nampiavaka azy.
Ny 1,3-dimethylbutylamine (methylpetanamine) sy ny DMAA (methylhexanamine) dia mitovy ny rafitra fototra, fa ny DMAA dia manana karba fanampiny ao anaty taolam-paty. Noho ireo fitoviana ireo dia mitovitovy amin'ny DMAA ny vokatry ny 1,3-Dimethylbutylamine. Vokatry ny dosie kely, dia fanindrahindrana mahery vaika amin'ny rafi-pitabatabem-bahoaka.
mitombo ny lanjany, manatsara ny asan'ny atletika, ary manatsara ny fiasan'ny atidoha.
1,3-dimethylbutylamine poids (108-09-8) Mekanisma amin'ny asa
Ny 1,3-Dimethylbutylamin dia miasa, amin'ny teoria, amin'ny dika mitovy amin'ny DMAA, nefa tsy toy ny potika. Izany dia mahatonga azy ho fitsaboana ho an'ny fahasalamana, satria miasa amin'ny famotsorana ny neurotransmitter norepinephrine, ankoatra ny dopamine. Ny haavom-pampandrosoana roa hormonina dia afaka mampitombo ny fiheverantsika, ny fifantohana, ny hery, ny antony manosika ary ny fahamalinana ara-tsaina.
fampiharana of 1,3-Dimethylbutylamine volo (1010396-29-8)
▪ Amin'ny alàlan'ny DMAA, famarotana aretin-tsakafo, fitaovana voajanahary tsara sy kisarisary, vokatra fitsaboana, sns.
▪ Amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny hydrochloride amin'ny 1,3 - dimethyl amine dia afaka mampitombo ny heriny, mamelombelona, ​​ary manatsara ny herin'ny vatan'ny olona, ​​na ny ateraky ny famerana ny kaloria manangona angovo mahomby indrindra.
▪ Ampiasaina amin'ny kilasy mavesatra izay ahafahanao manamaivana ny fiantraikan'ny fihenan-tsakafo vokatry ny hafanana. Misy tatitra momba ny hydrochloride 1,3 - hydrochloride dimethyl amine dia afaka mampitombo ny fahatsapana, manatsara ny fifantohana, manafoana ny fiankinan-doha, manakana ny fientanam-po.
▪ Azo ampiasaina koa ny kafeinina sy ny zavatra hafa entina amin'ny sakafo fanampiny.
Noho ny tsy fahampian'ny fitsapana ara-pahasalamana amin'ny vovony 1,3-Dimethylbutylamine, sarotra ny mamaritra ny doka voatendry. Noho izany, ny fampahalalana manaraka manaraka dia tsy misy afa-
Ny doka amin'ny vovony 1,3-Dimethylbutylamine dia andrasana ho ambony noho ny DMAA izay mamaritra azy amin'ny 100 amin'ny 350 mg. Ny fotoan'ny asa mahomby dia manodidina ny ora 4-6.
Tena mahomby ny fampitomboana ny angovo mandritra ny fampiofanana. Tsara ny maka ampahany amin'ny 30 minitra alohan'ny fampiofanana. Mba hampitomboana ny metabolisma sy ny fampihenana ny tavy dia tokony haka izany amin'ny maraina na alohan'ny sakafo.
Ny poeta 1,3-dimethylbutylamine dia miasa miaraka amin'ny kafeinina miaraka amin'ny kafeinina, ary noho izany dia afaka mahita matetika ireo akora ao anatin'ireo fanafody efa mialoha ianao. Raha ny fampiasana azy io "Solo" dia tokony hampiana kafeinina 200-300 mba hampitombo ny tombony.
soa of 1,3-dimethylbutylamine poids (108-09-8)
Noho ny fitoviany amin'ny DMAA ny fampiasana azy sy ny tombontsoa amin'ny fanampiana dia mitovy ihany koa. 1,3-Dimethylbutylamine vovoka dia manimba ny rafi-pitantanana afovoany toy ny kafeinina saingy tena matanjaka kokoa izany. Raha mampiasa io alohan'ny fampiofanana dia mety mahatsapa ianao:
♦ Hampitombo hery.
♦ Fampitomboana ny hery, aerôbika sy anaerobe.
♦ Mitarika ho amin'ny fifantohana bebe kokoa, ny fahatsarana ara-tsaina sy ny fanaparitahana ny metabolism.
♦ Manampy fatin'orana.
♦ Hncrease amin'ny fampisehoana atletika.
Na izany aza, tsy toy ny doka avo lenta amin'ny kafeinina, ny 1,3-Dimethylbutylamine dia matetika mifandray amin'ny famoahana hery bebe kokoa noho ny fianjeran'ny lozam-pifamoivoizana.